အစ်​ကို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အစ်​ကို	7
Posted by ko six on Jan 6, 2015 in Poetry |7comments
ကိုစစ်​ About ko six
မြစပဲရိုး says: အစ်ကို က ဖတ်မရ တဲ့ ထောင့်မှန်စတုဂံ တဲ့လား။
အစ်မ ဆိုရင်တော့ လှည့်မရတဲ့ စက်ဝိုင်း ဖြစ်မယ်။
kai says: Mother
The famous novel of revolutionary conversion and struggle. This novel of Russia before the Revolution is without question the masterpiece of Gorky, Russia’s greatest living writer. Into one passionate, astonishing book has been gathered the spirit of the terrifying struggle against the Czar’s autocracy. In it Russia stands forth inaflood of light.
ဂေါ်ကီရဲ့အမေကို မြန်မာပြန်ထားတာလေးရှိရင်.. ဖတ်ကြည့်ချင်သား..
manawphyulay says: အတူတူ လာခေါ်ရင်တော့ လိုက်သွားလိုက်ပါ… ဂေါ်ကီလို တော်ကီတော့ မများပါနဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Maung Thura says: သမုဒယ လို့ မရေးပဲ… ဘာလို့များ သမုသယ လို့ ရေးထားလဲ..တွေးနေမိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ထောင့်မှန်စတုဂံက မလှဘူး
ဘယ်နေရာမဆို ဝင်ဆန့်တဲ့သူမျိုး မဟုတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1
zaw myo says: ထောင်မှန်စတုဂံတဲ့လား
phyo gyi says: စက်ဝိုင်းလို့ ထောင့်မပါတာက